Somali State oo dib usoo ceshaty Deegaamadii Canfartu ka haysatay – Idil News
Somali State oo dib usoo ceshaty Deegaamadii Canfartu ka haysatay
Posted By: Jibril Qoobey May 4, 2019
Maamulka Dowlad Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa shalay buriyay ama laalay heshiis maamulkii ka horreeyay ee madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu la galay maamulka gobolka Canfarta ee dalkaasi.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda war-faafinta Dowlad Deegaanka Soomaalida, Salaad Dhabar Yuusuf ayaa BBC-da u sheegay in markii ay badatay dhibaatada haysata dadka deegaanadaasi deggan ay go’aansadeen in ay dhulkaasi ku soo celiyaan gacanta maamulkooda.
“Dhibaatooyin soo noqnoqday oo dad farabadan ay ku le’deen oo ka dhaca saddex degmo oo deegaanka Soomaalida ah, oo hadda ka hor dowladihii hore si sahrcidarro ah ay u hoos geeyeen deegaanka Canfarta ayaa had iyo jeer dadka Soomaalida ah lagu laayaa…inta la soo gala dhulka Soomaalida ayaa la laayaa… ilaa iyo hadda 50 qof baa lagu dilay dhulkaa. Dowladda deegaanka Soomaalida guddigeedu fulinta wuxuu go’aansaday in iyada oo laga duulayo dhibaatooyinkii soo noqnoqday, iyo canfarta oo ku guuldareysatay in ay fuliso heshiisyadii howladihii hore ee xitaa sharcidarrada ku gaaray wareejinta dhulkaa…sidaa awgeed baa dadkii la laayay, la dhibaateeyay marka dowladda deegaanka Soomaalida wuxuu go’aan ku gaaray in gebi ahaanba heshiiskaasi uu ka noqdo.”
Salaad Dhabar ayaa ciidamada gaarka ah ee deegaanka Canfarta ku eedeeyay in ay ku soo xad gudbeen dhulka Soomaalida waxa uuna beeniyay in ciidamada Liyuu boolis ee maamulka Soomaalida ay u gudbeen dhanka Canfarta.
Dhawaan ayay ahayd markii wasiirka warfaafinta ee Dawlad Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya Cabdullaahi Maxamed Mawliid uu BBC-da u xaqiijiyay dilka 11 qof oo Soomaali ah oo ay dileen maleeshiyaad ka tirsan qowmiyadda Canfarta.